Kolontsaina sy serasera: zava-bita roa notokanana ao Toamasina sy ao Fenoarivo Atsinanana - ewa.mg
News - Kolontsaina sy serasera: zava-bita roa notokanana ao Toamasina sy ao Fenoarivo Atsinanana
Anisan’ny singa lehibe
mandrafitra sy mampijoro firenena iray ny kolontsaina ao
aminy. Miezaka ny manarina ny simba,
mampahatsiahy ny tantara ary manasongadina izany ny minisiteran’ny
Kolontsaina sy ny serasera.
Nanamarika ny faran’ny herinandro teo tao Toamasina sy tao
Fenoarivo Atsinanana ny fampisongadinana sy ny fanandratana
avo ny lentan’ny kanto sy ny kolontsaina malagasy.
Notokanan’ny minisitry ny Serasera sy ny kolontsaina ny zava-bita
roa sosona. Ho an’ i Toamasina, notokanana ny mozea Vavitiana,
fantatry ny maro amin’ny hoe “Maison Nathan” teo aloha. Miorina
etsy amin’ny Place Bien-Aimé, Ampasimazava, rehefa nasiana
fanarenana taorian’ny fahasimbany. Trano vato lehibe efa niorina
hatramin’ny fanjanahantany (taona 1928) ity trano ity ary
nampiasaina amin’ny fametrahana andevo mialoha ny handefasana azy
ireny hamidy na atakalo.
Trano ahitana efitrano lehibe
ahafahan’ireo mpanankato manao fampisehoana. Ahitana fitaovana toy
ny solosaina ahafahan’ny mpanao gazety mikaro-baovao. Nambaran’ny
minisitry Serasera sy ny kolontsaina, Rakotondrazafy
Andriatongarivo Lalatiana, rahateo, nandritra
ny lahateniny, fa anatin’ny herinandro voalohany, azon’ny rehetra
tsidihina ny mozea Vavitiana fa aorian’izay, hisy fandraisana
anjara hahafahana mampihodina ny mozea.
Fanoitra ho an’ny
Ny kanto sy ny kolontsaina no fanoitra ho an’ny fampandrosoana
isam-paritra ary mipaka amin’ny firenena iray manotolo. Izay kosa
ny nivoitra tetsy anoloan’ny Araben’ny Fahaleovantena, ao Fenoarivo
Atsinanana, raha nitokana ny tsangambaton-dRabemanantsoa Bertrand
(Dédé Fénerive) sy i Jean Fredy ny minisitra Rakotondrazafy
Andriatongarivo Lalatiana, ny asabotsy 24 oktobra maraina.
Mpanankaton’ny taona 60 izy roa
lahy ireto ary anisan’ny nampisongadina ny kaiamba, raha samy
nivoaka avy ao amin’ny tarika Miarema. Nambaran-dramatoa minisitra
fa « ny kanto
sy ny kolontsaina dia ilain’ny fiainan’ny olombelona. Mivoy sy
manandratra ny faritra iray sy ny firenena ary ny maha olona ihany
koa. Manome fiantraikany anivon’ny rafi-piaraha-monina,
ankaharezana ny malahelo. Ilain’ny manam-pahasoavana sy hanaovana
fety. Ampiasaina amin’ny finoana». Anisan’ny andrarezin’ny kanto sy
ny kolontsaina rahateo i Dédé Fénerive sy i Jean Fredy.
I Dédé Fénerive, teraka ny 19 mey 1961 ary lavo ny 1 jolay 2017. I
Jean Fredy, teraka ny 4 martsa 1962 ary lavo ny 16 mey 2001. Ny
zanak’izy roa lahy ireo, efa misolo toerana ny
L’article Kolontsaina sy serasera: zava-bita roa notokanana ao Toamasina sy ao Fenoarivo Atsinanana a été récupéré chez Newsmada.
Kitra – «Can 2019»: mpilalaon’ny Barea telo nahazo karatra mavo
Mbola ao anatin’ny fanomanantena fatratra hiatrehana ny fihaonana faharoa, hikatrohana amin’i Burundi, ny Barea de Madagascar, amin’izao fotoana izao. Hatreto, ao anatin’ny fametrahana ny taktika ny mpanazatra. Kihon-dalana lehibe ho an’ny Barean’i Madagasikara ny fihaonana hifandonany amin’i Burundi, hatao ny alakamisy ho avy izao. Hiankina amin’ny vokatra eo mantsy ny ho tohin’ny lalany. Mila fitandremana goavana ny mpanazatra amin’ny fandaharana ireo mpilalao hiakatra eny ambony kianja.Anisan’ny mametraka olana mantsy ny fahazoan’ireo mpilalao telo mirahalahy karatra mavo. Anisan’izany i Amada sy i Marco ary i Metanire. Azo ampiakarina kianja ihany ry zalahy, saingy tsy ho afaka hilalao amin’ny fifandonana amin’i Nizeria raha mbola mahazo karatra mavo fanindroany, izay mbola fihaonana goavana sy hanan-danja ihany koa. Etsy ankilany, mpilalao iray ihany ny nahazo karatra mavo ho an’i Burundi. Hatreto, mbola ao anatin’ny fijerena ny paikady hiatrehana ny lalao amin’i Burundi, amin’izao fotoana izao, ny mpanazatra sy ny ekipany.Raha ny fahitan’ireo teknisianina, somary mavesatra ireo vodilaharana malagasy ka tsy tokony hanao fiarovantena milahatra. Tsy misy tokony hovaina kosa ny irakiraka satria nahafehy tsara ny baolina ary afaka nandrindra ny fanafihana. Mila asiam-panamboarana ihany koa ny lohalaharana satria tsy ampy mpamono baolina.Ankoatra izay, manaraka fanazaran-tena mitokana i Jeremy Morel, izay voadona teo amin’ny tongony. Lalao roa ihany ny anio Mandra-piandry izany, tsy misy afa-tsy fihaonana roa ihany ny hotanterahina amin’ity talata ity: ny lalao ao amin’ny vondrona F, izay hiakatra kianja ao Ismailia. Anisan’izany ny fifandonana eo amin’ny Liona tsy voafolak’i Kameronina sy i Ginea Bisao. Tsy afaka hilalao, amin’ity, i Faï Collins, vodilaharana kameroney.Noho ny karatra mavo roa azony nandritra ny fifanintsanana ny anton’izany. Any amin’ny fihaonana faharoa, hikatrohany amin’i Kintana maintin’i Ghana, hatao ny 29 jona ho avy izao, vao afaka hiakatra kianja i Faï Collins.Ny Ganeanina izay hifandona amin’ny Les Ecureuils-n’i Benin. Manana olana ihany koa ny Beninoà amin’ity satria tsy afaka hilalao ihany koa i Stéphane Sessegnon. Na efa 35 taona aza i Sessegnon, ilain’ny Les Ecureuils ny traikefan’io mpilalao io. TompondakaL’article Kitra – «Can 2019»: mpilalaon’ny Barea telo nahazo karatra mavo a été récupéré chez Newsmada.
Ho fanohanana ny zavakanto: “Tosik’Art”, fifaninanana izay tetikasa mahaliana…
Tsy tetikasa mahaliana fotsiny… Izay tetikasa maharesy lahatra, hampidi-bola ary hampiroborobo ny toekarena, kanefa mikasika ny sehatry ny zavakanto sy ny kolontsaina. Ireny no hifaninana anatin’ny “Tosik’Art”. “Fanoitra ho an’ny fampandrosoana ny kolontsaina”. Fehezanteny niverimberina nandritra ny lanonana fampahafantarana ny fifaninanana “Tosik’Art”, omaly, tetsy amin’ny Garan’i Soarano io. Ho fanamarinana izany rahateo ny antom-pisian’ity fifaninanana nasionaly ity, izay hampirisihina ireo mpisehatra rehetra eo amin’ny tontolon’ny zavakanto sy ny kolontsaina, hanolotra tetikasa mahaliana, maharesy lahatra ka azo tanterahina, hampidi-bola ary hampandroso. “Mbola vitsy anisa ireo mpandraharaha izay misehatra eo amin’ny famoronana ara-javakanto sy ny kolontsaina. Misy ny sakana maromaro mahatonga izany, fa hampirisihina izay vonona kosa ny “Tosik’Art. Hitiliana, hanampiana ary hanosehana azy ireo ity fifaninanana ity”, hoy ny nambaran-dRatovinirina Faly, tale misahana ny zavakanto sy ny fampiroboroboana ny kanto eo anivon’ny minisiteran’ny kolontsaina sy ny serasera. Nanamafy ny tanjona, nizara ny lalan-tsaina, nampahafantatra ny fizotry ny fifaninanana sy ny ho vokatr’izany ireo nifandimby fitenenena, nahitana an-dRakotondrabe Niry,t ale jeneralin’ny Ofisim-pirenena misahana ny zavakanto sy ny kolontsaina, Ben J izay mpanakanto sady anisan’ireo tompon-kevitra ary Razafiarison Francis, tale jeneralin’ny kolontsaina eo anivon’ny minisitera. “Misy lafiny roa ny kolontsaina, ka ny voalohany ilay hita sy re matetika ary mahazatra antsika. Ny faharoa kosa dia ilay mahakasika ny fihariana sy ny toekarena, mamorona asa ary mamelona olona sy fianakaviana maro. Tsy azo atao tsinontsinona io faharoa io, saingy mila miditra amin’ny sehatra matihanina mba ho tsapa tokoa ny maha fanoitry ny fampandrosoana azy… “Tosik’art”, hanoloran-tanana ny tetikasa maharesy lahatra, mahakasika ny zavakanto rehetra…”, hoy kosa ny nambaran’Andriantongarivo Rakotondrazafy Lalatiana, minisitry ny kolontsaina sy ny serasera. Araka izany, misokatra manomboka ny alatsinainy 5 aogositra izao ny fisoratana anarana, ho an’ireo mpisehatra manana tetikasa hifaninanana. Ho an’ireo teratany malagasy mihoatra ny 21 taona ny fifaninanana, ka afaka misoratra anarana any amin’ny foibem-paritry ny kolontsaina sy ny serasera izay handray anjara. Azo sintonina ao amin’ny tranonkala sy ny pejy “facebook” an’ny minisitera ihany koa ny taratasy fisoratana anarana sy ny andinindininy. Zo ny Aina RandriatsiresyL’article Ho fanohanana ny zavakanto: “Tosik’Art”, fifaninanana izay tetikasa mahaliana… a été récupéré chez Newsmada.
Tsy fahitan-tory telo andro misesy : ilaina ny manatona mpitsabo
Anisan’ireo filana fiziolojika ilain’ny olombelona toy ny sakafo, ny rano, ny masoandro, ny rivotra madio,… ny torimaso.Voajanahary ka tsy tokony akoy hihinana fanafody vao hahita tory ny rehetra. “Miantoka ny fahatomombanan’ny tontolo andro ny ampitso ny torimaso anio alina, mora mifantoka kokoa ny olona rehefa ampy tsara ny torimasony”, hoy psychiatre ao amin’ny CHU-SSP Analakely, ny dokotera Raobelle Evah. Na tsy ampy na diso be loatra ny faharetan’ny torimaso, miteraka fikorontanan’ny fiasan’ny olona iray. Endrika isehoan’izany ny fikorontanan’ny fifantohana, tsy tomombana ny fitadidiana, marary an-doha, mora kizintina, mora tezitra, mahatsiaro reraka raha vao maraina, marary lamosina matetika, fanina, mangovitra, midobodoka be ny fo… Nomarihiny fa raha ho an’ny olona mifanintona, anisany mihitsy antony mampiverina ny fanintona ny tsy fahitan-tory. Ara-pahasalamana ny torimaso rehefa feno ny fepetra efatra: 15 minitra aorian’ny hitadiavana torimaso dia efa tokony tafatory ilay olona. Ampy adiny fito na adiny valo ny faharetan’ny torimaso ho an’ny olon-dehibe. Tsy mihoatra ny roa ny fifohazana mandritra ny alina ary mahatsiaro tena ho afa-bizana sy mavitrika ilay olona rehefa mifoha ny ampitso maraina. Raha mihoatra ny telo andro misesy ny tsy fahitan-tory, tsara indrindra ny manatona mpitsabo hijerena ny antony mahatonga ny fikorontanana’ny torimaso amin’ny olona iray.Tsy tokony handray avy hatrany fanafody fampatorianaOlana mateti-pitranga amin’ny olombelona ny fikorontanan’ny torimaso. Maro ny antony manakorontana ny torimaso toy ny fisian’ny aretina na ny fanaintainana amin’ny vatana, ny fidorohana na ny fisotroana zava-mahadomelina sy ny fiankinan-doha amin’izy ireny. “Matetika, ny adin-tsaina sy ny fahaketrahana saina ny tena antony”, hoy ity mpitsabo ity. Noho izany, tsy tokony hamaivanina ny fikajiana ny torimaso satria antoka iray lehibe amin’ny fikolokoloana ny fahasalaman’ny saina sy ny vatana. Tsy tokony hotadiavina ny torimaso fa tonga ho azy nefa manano sarotra ny fahatongavan’ny tebiteby misy ao anatin’ny olona. “Tsy tokony handray avy hatrany fanafody fampatoriana koa anefa noho izy mety hiteraka fiankinan-doha”, hoy ny fanazavany ihany. Betsaka ny fomba afaka hanampy hananana torimaso tomombana ka anisany ny tsy fanovaovana ny ora fatoriana sy ny ora fifohazana. Eo ny fihinanana sakafo maivana amin’ny hariva ary ny efitrano fatoriana milamina sy tsy misy hazavana be. Tokony ho 22° C ny maripana ao amin’ny efitrano fatoriana. Manampy betsaka koa ny fieritreretana zavatra telo nahafinaritra nandritra ny tontolo andro hampanalavitra ny tebitebin-tsaina ka hanamora ny fatoriana.Nangonin’ i Vonjy A.L’article Tsy fahitan-tory telo andro misesy : ilaina ny manatona mpitsabo a été récupéré chez Newsmada.
Fahasalamana: aretina fahefatra mandripaka ny tazomoka
Distrika enina no tena mbola ahitana aretina tazomoka mandritra ny taona eto Madagasikara. Aretina fahefatra mamono ny tazomoka, indrindra ho an’ireo ankizy sy reny bevohoka. Misy ny fiofanana handrindrana ny fizarana lay amin’ny taona 2021.Anisan’ny valanaretina fahefatra mbola mandripaka eto amintsika ny aretina tazomoka raha ny filazan’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Tsy mbola tena voafehy izy ity na eo aza ny ezaka sy ny fanentanana hatao.Fampitomboana ny traikefa sy fanaovana tomban’aezaka ny fizarana lay misy odimoka maharitra amin’io taona 2021 io indrindra no anton’ny atrikasa. Tanterahin’ireo mpiantsehatra ara-pahasalamana ao Antsirabe, maharitra 5 andro izany.Efa misy ny hetsika mahazatra fizarana lay misy odimoka amin’ireo faritra maro manerana ny Nosy, indrindra amin’ireo faritra mando sy mafana izay mampahazo aina ny aretina. Eo koa ny famendrahana fanafody mamono moka atao isan-tokantrano.Anisan’ny manatanteraka izany ny ao amin’ny faritra Ihorombe sy Atsimo Andrefana. Nanomboka ny 2 novambra teo ny hetsika ary mitohy isan’andro, hatramin’ny 2 desambra izao.Voakasik’izany ny distrikan’i Tolira II, Betioky, Sakaraha, Ihosy ary Iakora. Manodidina ny tokantrano 203.513 no hofendrahana ranom-panafody mamono moka sy bibikely amin’izany. Manaraka hatrany ny fanajana ny fepetraka amin’ny ady atao amin’ny covid19 hatrany ny famendrahana hatao.Raha ny fantatra, mamono olona manodidina ny 405.000 isan-taona ny aretina tazomoka maneran-tany . Ho an’ny taona 2018, nahatratra 228 tapitrisa ny tranga tazomoka amin’ireo firenena 100 mbola ahitana ity aretina ity.Eto Madagasikara, distrika enina no mbola tena ahitana tazomoka mandritra ny taona ary mbola ambony ny tahan’ny olona voan’ny aretina. Anisan’izany ny distrikan’i Bekily, Port-Bergé, Mahanoro, Farafangana, vangaindrano ary Antanambao Manampotsy.Misy ny fizarana mitohy ny lay amin’ireo distrika ireo hahafahan’ny tokantrano miaro tena amin’ny kaikitry ny moka.Tatiana AL’article Fahasalamana: aretina fahefatra mandripaka ny tazomoka a été récupéré chez Newsmada.
Ecole Royale du Maroc – ERSSM: nanome vatsim-pianarana ny Tafika Malagasy
Mihamafy orina hatrany ny fiaraha-miasa amin’ny tafika eo amin’ny firenena malagasy sy i Maraoka. Ao anatin’izay fiaraha-miasa izay, nanolotra vatsim-pianarana ho an’ny Tafika Malagasy ny firenena maraokanina ho fizarana ny traikefa sy ny fahaiza-manao. Ho amin’ity taona 2019 ity, vatsim-pianarana hiofanana mpianatra ho manamboninahitra eo anivon’ny sekoly Ecole Royale du Maroc sy ny vatsim-pianarana ho an’ireo mpianatra ho manamboninahitra mpitsabo eo anivon’ny Ecole Royale du service de Santé Militaire (ERSSM) ny atolony amin’izany. Omaly ny nanatanterahan’ireo mpifaninana hiatrika ny fiofanana mpianatra ho manamboninahitra eo anivon’ny sekoly Ecole Royale du Maroc izay nahitana mpiadina sivy mirahalahy avy ao amin’ny sekoly miaramilam-pirenena (Semipi) ao Fianarantsoa. Tsara ny manamarika fa efa notsongain’ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny sekoly misy azy ireo izy sivy mirahalahy ireo ary mpianatra efa manomana ny fifaninanana hidirana mpianatra ho manamboninahitra na ny « classe préparatoire » izany. Ny taranja frantsay no nanadinana azy ireo tamin’izany ka nanaovana ny famakafakan-kevitra ka mbola hiatrika adina faharoa izay hotontosaina eny amin’ny masoivohon’i Maraoka izay afaka amin’izany. Ny herinandro ho avy izao kosa no hanatontosana ny fanadinana hifaninanana hidirana ho manamboninahitra mpitsabo eo anivon’ny ERSSM.Jean Claude L’article Ecole Royale du Maroc – ERSSM: nanome vatsim-pianarana ny Tafika Malagasy a été récupéré chez Newsmada.
Nandany an’arivony miliara i Mamy Ravatomanga, nandritra ny fampielezan-kevitra fihodinana voalohany ho famerenana an’i Andry Rajoelina eo amin’ny fitondrana, hiaro azy manodidina ny raharaham-pitsarana atsy Frantsa. Kolikoly, fanadiovana vola maloto, fanodinkodinam-bolam-panjakana, sns. Araka ny taratasy nataon’ny PNF (Parquet National Financier) tamin’ny 22 jona 2017 tany Parisy, nosoniavin’ny Mpampanoa Lalàna, Emmanuel Chirat, mitondra ny laharana 16 040 000 444 dia mangataka amin’ny manam-pahefana malagasy ny fanambaran-ketra rehetra amin’ny anaran’i Mamy Ravatomanga mivady ny lehiben’ny Fampanoavana any Frantsa, sy izay rehetra mikasika ny orinasa Ramy, Mialy, Aina ary Lovanirina, manodidina ny taona 2010-2016. Mangataka ny hakana am-bavany ny tale jeneralin’ny hetra ihany koa ny PNF, mba ahafantaran’izy ireo amin’ny antsipiriany izay resaka hetra momba ireto orinasan’i Mamy Ravatomanga ireto. Etsy andanin’izany, mangataka ny hakana am-bavany ireo mpanao fanadihadiana ao amin’ny Bianco, nandray an-tanana ny raharaha Mamy Ravatomanga ihany koa ny PNF (vavolombelona tsotra), na ireo izay olona heverina fa ilaina amin’izao raharaha Mamy Ravatomanga atsy Frantsa izao. Izany rehetra izany no angatahin’ny PNF, dia ny hivoahan’ny marina manodidina izao kolikoly, famotsiam-bola maloto, ary fanodinkodinam-bolam-panjakana iampangana azy izao. Mila an-dRajoelina Mila ny fiverenan’i Andry Rajoelina maika eo amin’ny fitondrana tokoa i Mamy Ravatomanga manoloana io fangatahana fiaraha-miasa nalefan’ny « parquet national financier » atsy Frantsa amin’ny manam-pahefana Malagasy io. Izay ihany no lalana heverin’i Mamy Ravatomanga fa ahafahany miaro tena, ka nahatonga ireny fandaniam-bola an’arivony miliara nandritra ny fihodinana voalohany ireny. Isan’ny olona tokony hatao fanadihadiana sy alaina am-bavany amin’izao raharaha izao i Andry Rajoelina. Ny taona 2011 no nividianan’i Mamy Ravatomanga ireo trano be mitentina 100 Miliara, kanefa tsy nahitana fanambarana teny anivon’ny sampan-draharahan’ny hetra frantsay araka ny voalazan’ny andininy faha-885 A- 2e amin’ny CGI, izay milaza fa tsy maintsy atao izany fanambarana izany rehefa mihoatra ny 1 300 000 Euros ny tombam-bidin’ny fananana. Izany hoe nandritra ny fitondrana Tetezamita notarihin’i Andry Rajoelina no nividianan’i Mamy Ravatomanga ireo trano be ireo, ka mahatonga ny PNF mangataka amin’ny fanjakana malagasy ny fanambarana ara-ketra teo anelanelan’ny taona 201-2016. Io fiarovana an’i Mamy Ravatomanga manoloana ny kolikoly sy famotsiam-bola, ary ny fanodinkodinam-bolam-panjakana hanenjehan’ny Fitsarana Frantsay azy, izay no mahamaika mafy an’i Andry Rajoelina hiverina eo amin’ny fitondrana, ka namoronana ireny IEM sy hanaovana ireny fizaram-bary eny amin’ny faritra iva ireny. Havoaka eto amin’ny gazety amin’ny alarobia ho avy izao indray kosa ny mikasika ny raharaha JIRAMA, izay efa eny am-pelatanan’ny Bianco, isan’ireo dosie tafiditra amin’ilay fanodinkodinam-bolam-panjakana iampangan’ny PNF an’i Mamy Ravatomanga. L’article « Parquet National Financier » : Fanambaran-ketran’i Mamy Ravatomanga? est apparu en premier sur .L’article « Parquet National Financier » : Fanambaran-ketran’i Mamy Ravatomanga? a été récupéré chez Triatra.
Tsy nisy tranga vaovao: 58 ireo sitrana tamin’ny coronavirus
Nanomboka alatsinainy teo ka hatramin’ny omaly, tsy nisy ny tranga vaovao tratran’ny coronavirus. Mbola mitohy hatrany anefa ny fitiliana, araka ny nambaran’ny eo anivon’ny CCO eny Ivato ka miisa 17 ireo natao izany, omaly. Niampy enina indray izany izao ireo sitrana ka 58 ireo nalefa nody any an-tokantranony, hatreto. Miisa 63 kosa ireo mbola tsaboina sy arahi-maso eny amin’ny hopitaly amin’izao fotoana izao. Tsy niova fa mijanona ho 121 ireo tratran’ny coronavirus manerana ny Nosy.Manao fitiliana hatrany isan’andro « Tsy ankiato ny fitiliana ary isan’andro, misy laboratoara iray hafa koa manao izany ka samy tsy nahitana tranga vaovao avokoa ireo. Anisan’ny tena tiliana amin’izany ireo ahina ho nifanerasera tamin’ny nahitana tsimokaretina », hoy ihany ny eo anivon’ny CCO. Mbola nanamafy hatrany ny tompon’andraikitra amin’izao fifaneraseran’ny olona izao amin’ny fampiasana ny arovava, raha tena tsy maintsy mandeha mivoaka ny trano. « Tena mifanaretsaka tokoa ny olona ka tsy tokony hiala eny ny arovava. Tsy ampidinina na esorina, indrindra ho an’ireo mikohaka… Entanina hatrany isika hampiasa izany na tsy misy tranga vaovao aza. Misy ihany ireo manaraka toromarika kanefa tsy tokony ho variana ka higoragora amin’ny fepetra isika », hoy ny CCO.Fanaraha-maso ny fiparitahan’ny covid-19Notsiahivin’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fahasalamana, tamin’ny alalan’ny sekretera jeneraly, ny Pr Solofomalala Gaetan Duval fa tsy midika ho tsy misy intsony ny fitiliana rehefa tsy misy ny tranga vaovao. « Miisa 39, 32, 35 ary 17 ireo notilina nanomboka ny alatsinainy teo hatramin’izao (omaly) », hoy izy. Miisa 2 313 kosa ireo efa nanaovana fitiliana ankoatra ny olona nampiasana ilay fitiliana haingam-piasa (TDR).Synèse R. L’article Tsy nisy tranga vaovao: 58 ireo sitrana tamin’ny coronavirus a été récupéré chez Newsmada.
Tsy mandeha ho azy amin’izao. Nampahafantarin’ny eo anivon’ny Ceni fa mitovy amin’ny fifidianana rehetra ihany ity fifidianana loholona ity. Anisan’izany ny tokony hanajana ireo lalàna mifehy izany.“Voalohany, ny fanajana ny firaisam-pirenena sy ny toe-tsaina momba ny fihavanana malagasy. Eo koa ny tsy fiandanian’ny fitondram-panjakana sy ny tsy fitanilan’ny sampandraharaham-panjakana.” Io ny nampahatsiahivin’ny mpampaka-tenin’ny Ceni, Ra­ko­tondrazaka Fano, taorian’ ny fivoriana niarahana tamin’ ireo mpanara-maso fifidianana teny Alarobia, omaly, mo­mba ireo fepetra folo tokony hohajaina amin’ny fanaovana fampielezan-kevitra amin’ izao fifidianana loholona hatao amin’ny 11 desambra izao.Tsy fitanilan’ny RNM/TVM Manaraka, ny tsy fitanilan’ ny sampandraharaham-panjakana momba ny haino aman-jery ary ny radio sy ny televiziom-panjakana. Eo koa ny tsy fiandanian’ny toeram-pi­va­vahana, izay tsy azo anaovana fampielezan-kevitra. Mila tandrovina hatrany ny rariny sy ny fitovian’ny herijikan’ny kandidà rehetra; ny fangaraharan’ny loharanom-pa­ma­tsiam-bolan’ny fampielezan-kevitra sy ny fampiasam-bola natokana ho amin’izany, izay tsy maintsy hanendren’ ny kandidà izay mpitambolan’ ny fampielezan-kevitra.Tsy fidirana amin’ny fiainana manokana Mila hajaina ny fanajana ny fahamarinan-tena sy ny vo­ni­nahitra ary ny fahamendrehan’ny kandidà sy ny mpifidy; ny fahamarinan’ny fiainan’ny te­na manokana sy ny ny zavatra manokana momba ny kandidà. Tsy fidiran’ny mpanao fa­mpielezan-kevitra amin’ny fiainana manokana izany; ny tsy fihantsiana amin’ny fankahalana sy ny fanavakavahana; farany, ny fitandroana ny filaminam-bahoaka.R. Nd.L’article Fifidianana loholona: namoaka ny didy 10 amin’ ny fampielezan-kevitra ny Ceni a été récupéré chez Newsmada.
Les trophées pour les compétitions officielles des Rencontres du Film Court ont été présentées lors de la conférence de presse hier (crédits photo : Tiaray) RFC en est à sa 15e édition cette année. Du 20 au 28 novembre, les cinéphiles se donnent rendez-vous dans la capitale malgache. Un événement d’ampleur international qui a pour ambition de faire venir des publics de toute génération, et de toute origine culturelle autour d’une activité riche, fédératrice et de qualité. Action culturelle qui unit le continent noir, la RFC est une manifestation proposée dans une démarche d’instruction, faite de relations humaines avec une volonté de faire se rencontrer les artistes professionnels et les passionnés de cinéma. RFC donne la possibilité aux artistes et aux cinéphiles de se rencontrer, et d’assister à des spectacles variés et de qualité. Selon les organisateurs, « une trentaine de faiseurs de films d’ici et d’Afrique sont en lice pour les zébus d’or. Près de 250 films seront répartis en 65 séances dans divers endroits de la ville mais dont l’essentiel se déroulera à l’IFM Analakely et au Cinépax Tana Water Front ». Parce que la RFC affiche sa volonté de promouvoir le mélange des genres artistiques, « les RFC ont accueilli 276 candidatures venues de 31 pays d’Afrique pour cette édition et en ont sélectionné une vingtaine ». Réunies autour d’une même ouverture d’esprit, la programmation artistique et toutes les activités proposées sont imaginées dans le but de donner à chacun un moyen de s’épanouir et de s’exprimer. Maminirina Rado L’article RFC : 250 films diffusés en huit jours est apparu en premier sur Midi Madagasikara.L’article RFC : 250 films diffusés en huit jours a été récupéré chez Midi Madagasikara.
Capitaine de Vaisseau, GA Jacquy Honoré: « Ilaina ny fanamafisana ny fampiofanana eto an-toerana”
“Tafiditra ao anatin’ny torolalana fanovan-drafitra avy amin’ny minisiteran’ny Fiarovam-pirenena sy ny Etamazaoron’ny Tafika ny fisian’ny ivontoeram-piofanana an-dranomasina izay fomba iray ahafahana manatsara ny fahaiza-manao sy traikefa ananan’ny tantsambo miaramila hahatonga azy ireo ho matihanina tanteraka”, hoy ny lehiben’ny Etamazaoron’ny Tafika an-dranomasina, ny capitaine de vaisseau, ny GA Jacquy Honoré, nandritra ny fankalazana ny andron’ny mpitantan-draharaha arovan’ny masindahy Martin, ny fitantanan-draharaha eo anivon’ny Tafika malagasy, ny zoma teo tao Mahajanga. Nohamafisin’ity manamboninahitra ity fa fotoana izao hanamafisana ny fampiofanana vita eto an-toerana tsy hiankinana amin’ireo sekoly avy ivelany tahaka ny teo aloha. Efa misy 11 ireo tantsambo miaramila manaraka ny fiofanana ao ahazoana mari-pahaizana BAT Machine “Brevet d’aptitude technique” ary hisantarana amin’ny fomba ofisialy ity ivontoeram-piofanana ity ireo tovolahy voaantso hanohy asa miaramila ao amin’ny Tafika an-dranomasina miisa 200, ny faran’ny volana ho avy izao. Ankoatra ny Semipi, nahazo ny anjara fanomezana ho azy ny ivontoeram-piofanan’ny Tafika an-dranomasina ka ny lehiben’ny “direction central du commissariat des armées”, ny amiraly Assany Bemarivo Jeannot, ny nanolotra izany amin’ny tompon’andraikitry ny ivontoerana, ny lieutenant de vaisseau, i Anahy Zafinirandra Edson Claudino.Jean ClaudeL’article Capitaine de Vaisseau, GA Jacquy Honoré: « Ilaina ny fanamafisana ny fampiofanana eto an-toerana” a été récupéré chez Newsmada.